Factorylọ ọrụ China Welded Gabion na ndị nrụpụta | Hangtong
Gabion bu ihe eji ebu mmanu ma jiri ya mee otutu onodu tinyere njigide nke mo na ngbali elu, njikwa osimiri, ebe ndozi mmiri, ndozi ugboala, na idozi mgbidi. Enwere ike ịmepụta ha na welded ma ọ bụ waya a kpara akpa. Welded m gabesh bụ ngwa ngwa ịgbazi na achọghị mkparịta ụka. Nke a na-enye ha ohere idobe ụdị ha, ka ha nwere onwe ha pụọ ​​na oke aka na nkụda mmụọ ma dabara adaba na mgbidi ahụ. Enwere ike igbutu oghere n'ime ha ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịnyefe ọkpọkọ wdg ma enwere ike jupụta igwe.
Welded Mesh Gabions na-arụpụtara site na Galfan Wire ma ọ bụ usoro ndụ gbara agba.
3 ″ x 3 ″ (76.2mm x 76.2mm) x 3, 4 ma ọ bụ 5mm Galfan kpuchitere (95% zinc 5% alumini ruo ugboro anọ nke ndụ galvanized. dị n’elu ma na-eji 2.7mm Galfan kpuchie isi nke na-acha aja aja PVC kpuchie ihe karịrị dayameta ọ bụla ma ọ bụ 3.22mm, ọkpụrụkpụ mkpuchi adịghị ihe na-erughị 0.25mm.
Welded Gabion nkọwapụta
Ubu Gabion (m)
Galvanized Galfan ma ọ bụ galvanizing na ntụ ntụ nte
3 × 2 × 0.3 (Matri)
Welded gabion atụmatụ
Ọ dị mfe ịgbakọta
● Ezigbo mma, ọ bụghị naanị iji ya na mpaghara mmiri, kamakwa enwere ike iji ya na mgbidi e ji achọ mma
Anti Nnukwu mgbochi corrosion: waya dị arọ ma ọ bụ waya nke Galfan, ma ọ bụ mkpuchi uzuzu iji mee ka eririion gabion nwee ike melite ikike nke mgbochi mmiri, nwere ike ịdabere na gburugburu oke osimiri.
Ọnọdụ akụ na ụba: Mfe gabalụlarị ụzọ waya dị ala karịa ọtụtụ ihe ndị a na-ewu. Ejikwa okwute grajuru na-abụkarị mpaghara. A ga-akọwapụta ihe ndị na-emebi emebi dị ka ihe na-adịghị emebi emebi n'ọnọdụ nkume.
Welded gabion ngwa
A na-ejikarị ya agagharị na mbuze nke ala, nchịkwa osimiri, ebe a na-edebe mmiri, ndozigharị canal, ịkpụcha ala na idobe mgbidi, nche anwụ, wdg.
Waya jiri waya nke carbon carbon dị ala, dayameta 3.0-6.0mm
Spirals jiri waya steel carbon dị ala, dayameta waya 4.0-5.0mm
Elu: Galvanized ma ọ bụ galfan ma ọ bụ uzuzu kpuchie
Enwere ike ịhọrọ ọkwa nchara.
Nke gara aga: Gabion nkata
Na-esote: Ihe Mgbachitere